Waxaa qoray nacasyo inay akhriyaan akhlaaqdaro ... | Martech Zone
Waxaa qoray nacasyo inay akhriyaan akhlaaq darada…
Khamiista, Diseembar 21, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Mr. Rago, oo ah kaaliyaha tifaftiraha astaamaha tifaftiraha ee The Wall Street Journal, si xarago leh cinwaanada bogga sida:
Mob Blog-ka: Waxaa qoray doqonno ay akhriyaan akhlaaqdaro.
Kani wuxuu noqon karaa kii ugu caajiska badnaa uguna weynaa ee aan ku arko xirfadle Wargeyska! Sida xirfadle wargeys hore, runtii waa wax laga xumaado in la arko dabeecaddan. Kaba sii darane, waxaan taageere u ahay Wall Street Journal. Halkii aad ka qaadan laheyd "warka weyn" wargeysyada waxay u maleynayaan in loo ilaaliyo "wadada lacag bixinta macluumaadka" iyo "hal dhinac" wadada taas.
Mudane Rago, waan ka xumahay inaad lumineyso xakamaynta sifeynta, shaandhaynta, iyo tafatirka macluumaadka ka hor intaanan 'noo oggolaan' inaan dheefshiido. Waan ka xumahay inaan ka maqanahay ereyada iyo xirfadaha naxwaha ee qof darajadaada ah. Waxaa laga yaabaa in aragtidaadu ay wax ku leedahay fikradda dadka kale oo dhan aad wax soo saarka:
Ama tan… Technorati marka la barbardhigo:
Mudane Rago, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isha ku hayso nacaskan ... wuxuu soo jiitaa dad aad u tiro yar (geeska midig ee hoose):
Waxaan rajeynayaa inaan isbarbar dhigo aqristayaasheena sanadka soo socda… hadii aad ag joogtid. Waxaan ka shakisanahay inaad noqon doonto.
RSS = Dib u bilaw Iskuduwaha Fudud? Ku daabac Resume-kaaga khadka tooska ah
27, 2006 at 3: 23 AM
Had iyo jeer waxaa jira xoogaa mooryaan ah oo halkaas jooga oo u maleynaya inuu isagu / iyadu wax walba ogyahay. Sida iska cad, isagu ma lahan wax caqli gal ah inuu wax ku qoro meesha ugu horeysa… haye waa kan fikirka… waxaa laga yaabaa inuu ka walwalsan yahay in blogger ka fiican (Doug) uu la imaan doono oo uu shaqadiisa ka qaadi doono? 8)